Aleksandr Sergeevich Spivak wazalwa ngo-1975, January 6, emzini Mariupol (Ukraine). Ibhola waqala ukuhileleka iminyaka 10. Ngalesi ubudala, wazihlanganisa esikoleni football lomzi wakhe bomdabu - "Innovator" - futhi wafunda khona iminyaka 4. Ngemva kwalokho, ngo-1989, Spivak iyiswe School Olympic Reserve Akhiwe IDonetsk.
Qala of footballer umculi okhokhelwayo
Phakathi nenkonzo yakhe yokuba Aleksandr Spivak ephethwe ukudlalela amaqembu amaningi e-Ukraine, phakathi kwabo "Shakhtar" (IDonetsk) kanye "Metallurg" (Zaporozhye), futhi "Chernomorets" (Odessa). Ngaphezu kwalokho, Spivak ukudlalwa iqembu Polish "Steel". Nakuba club ukhiye ebholeni umsebenzi wakhe, yebo, iyona Petersburg "Zenith". Kodwa izinto zokuqala kuqala.
Eyokuqala professional lebhola waba club "Silurian", lapho Spivak uchithe isizini eyodwa. Khona-ke kicker Unquma ukuzama isandla sakhe phesheya, okungukuthi ePoland. Alexander Spivak uya ethimbeni "Steel", ngaleso sikhathi wayedlala division yezwe yesibili. Nokho, ayizange ihlale lapho isikhathi eside, ukudlala isizini eyodwa. Phakathi nalesi sikhathi, wabonisa imiphumela oluvelele: phezu 16 wachitha Spivak imidlalo akazange amaphuzu noma yimiphi imigomo.
Ngo-1994, u-Alexander ebuyela ezweni lawo futhi usayine isivumelwano ne club "Odessa". Lapha athlete kudlalwa isigamu sonyaka, bathuthela komunye club Ukrainian - "Chernomorets". Kulesi umyalo, ebholeni, izinto zihambe kangcono, wathola ukuzinza. Nokho, ngenkathi elandelayo (1995/1996) Spivak useqalile e elinye iqembu, usaqhuba njengelinye lamazwe izintandokazi.
I impumelelo lokuqala Alexander football
Leli thimba - "Umvukuzi", lapho kudlalwa iminyaka emibili futhi waphoqeleka ukuba ashiye isikhundla sakhe ngoba wayenezinqola ukuzinza walahleka iningi isikhathi esichithwa zigciniwe.
"Shakhtar" Management uye wanquma ukuthumela Spivak yerenti, amnike ithuba ukudlala ezingeni eliphezulu. Oyedwa onentshisekelo football okwamanje eziningi amakilabhu, kodwa Alexander wakhetha Kirovohrad "Izinkanyezi." Njengoba umdlali ngokwakhe wathi, wakhetha lo club ngenxa Umqeqeshi Aleksandra Ischenko, yena ziphathwe ukuhlonishwa kakhulu.
Spivak yamukelwa kahle e Kirovograd, futhi ngemva konyaka kwaqashelwa ngu Miron Markevich. Umqeqeshi Inhloko "Metallurg" sinesithakazelo esikhulu umdlali, bayengela kuye kuye. "Metallurg" wathenga abadlali ngesikhathi "Umvukuzi" inkontileka, kodwa ngemva konyaka futhi Spivak bathuthela komunye ithimba.
Isikhathi esichithwa ku "Zenith"
Ngo-2000, u-Alexander Spivak ushiye football Ukrainian phakade futhi zayiswa Petersburg. "Zenith" uye ikhokhelwe ukudluliswa umdlali amadola angaba yizinkulungwane 300, futhi ungazange sizisole. Ekuqaleni, lapho u-Alexander waba umsebenzi esikhundleni ihambe Roman Maksymiuk. Kufanele wathi Spivak wawenza kwe 100 phesenti.
Esikhathini zokuqala ezimbili imidlalo ye "Zenith" Alexander Spivak, njengoba mdlali, wakwazi ukuhlukanisa yena kathathu. Ngaphezu kwalokho, le midlalo "blue and white" wachitha endleleni, futhi ngokushesha Spivak baba inkanyezi ithimba elisha. Ngaphandle nje kokuthi "Zenith" e yokufuna umdlali abangu abanesifiso amaqembu amaningi isiRashiya, kuhlanganise CSKA futhi "Wings of namaSoviet." Nokho, Spivak wakhetha Petersburg. Isici esiyinhloko esinqumweni sakhe, emazwini umdlali football, baba nengxoxo nomongameli club.
Enhloko-dolobha enyakatho yeRussia, Alexander wachitha yakhe best football iminyaka. Esikhathini "Zenith", yena wadlala iminyaka 7, lufakwe kwi ukudluliswa yabatshela kokuphothulwa amathuba okuba umculi okhokhelwayo ngo-2007. Leonid Buriak wathi: "ahloniphekile kanye indoda uhluzekile, kodwa umdlali omuhle. Uma zonke lezi zimfanelo sihlanganise kumuntu oyedwa, ngeke Alexander Spivak. " Player bangaziqhayisa umsebenzi wakhe, ngoba kuze kube manje, abalandeli "emhlophe-oluhlaza" ukhumbule bayazigqaja.
Umkhaya kanye ukuphila komuntu umdlali webhola lezinyawo lase
Uma sikhuluma ngabantu abadumile abangathandi ukuze adalule ukuphila kwabo kwangasese obala, ngomunye wabokuqala kulolu hlu kuyoba Alexander Spivak - football. Umndeni umdlali yangaphambili "Zenith" kunabantu ababili: nomkakhe Natalia nendodana kaDaniyeli.
Phakathi izinkulumo ukuze club kusuka Petersburg footballer ayephila nomkakhe. Kunjengoba u-Alexander yena waveza, babeqala bekubudisi. Ekuqaleni babehlala efulethini eziqashiwe, zehlulekile ukuthenga bebodwa. indodana ka-Alexander uDaniyeli wayesesangweni laseDonetsk, a footballer futhi unina waqhubeka esikoleni. Manje umkhaya ophila Petersburg, noDaniyeli isivele ukufunda eyunivesithi.
"Okokuqala, Petersburg kwakunzima ngenxa yezinkinga izindlu. Ukulandela yokufuna efulethini lakhe, konke kwahamba kahle. Thina Natalia ngokwabo wanikeza efulethini ngaphandle kosizo umklami, "- wathi ngesikhathi enengxoxo Alexander Spivak. ukuphila Siqu footballer ngokuqinile oluthathwa. Ngokukhulu ukuzethemba singakwazi kuphela sithi u-Alexander Spivak kuyinto umndeni indoda okuyisibonelo futhi abe nguyise okukhulu.
Mario Mandzukic - Biography nomsebenzi Umgadli abadumile Croatian
Swiss wasemuva Rodriges Rikardo
Football player German Otto Rehhagel: Biography nokufeza
Futhi une amazinyo aphuzi?
Awusoze ufunde tricks izimfihlo-Google Search, uma miss it